चिल्ला सडक किनारमा मगन्ते देखिनुहुन्न : मन्त्री गुरुङ - Himal Dainik
नेपाल ९ असार २०७७, मंगलवार ००:००
यस यथार्थलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ समाजको पीँधमा रहेका वर्गको हित र विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक विमर्शसहित नीतिगत रुपान्तरण गर्ने काममा अनवरत लागेका छन् । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन् ।
मन्त्री गुरुङसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा सोमबार प्रकाश सिलवाल र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण
सामाजिक क्षेत्रमा यस मन्त्रालयको प्रभावकारिता के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । वास्तवमा हाम्रो अधिकार क्षेत्र खुम्चँदै गएको छ । यससँग जोडिएका कतिपय सामाजिक कार्य भने सङ्घीय मामिला वा गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन् । कुनै मन्त्रालयसँग गाभिने मन्त्रालयका रूपमा छलफल चल्दा पहिले यसै मन्त्रालयलाई हेर्ने गरिँदो रहेछ । विगतमा गठबन्धन सरकारहरू बन्दा कुनै साना दललाई जिम्मेवारी दिने वा सत्ता समीकरणका लागि यसलाई उपयोग गर्ने काम हुन्थ्यो भनिन्छ । अब त्यस्तो हुँदैन ।
हामी यसका सेवा क्षेत्र र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा विकसित गर्न खोज्दैछौँ । अहिले जसरी कोरोना महामारीको असर परिरहेको छ, यसको रोकथामका लागि सचेतना, सरसफाइ, उचित आहार–विहारका कुरा सामाजिक विकास र चेतनासम्बद्ध विषय हुन् । आखिर समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक विकासका साथै मानवीय र सामाजिक विकास पनि त हो ! त्यसकारण यसका लागि बजेट विनियोजनको विधिमा पनि केही पुनरवलोकन गर्नैपर्छ ।
मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस मन्त्रालयको प्रोफाइल कसरी माथि उठाउने भनेर योजनासहित काम शुरु भएका छन् । यहाँ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन (२०१८) मातहत दर्ता भएका संस्थाहरूको कुरा अलि बेग्लै रहेछ । तिनीहरूले राज्यलाई प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण बुझाउनु नपर्ने खालको देखिएको छ । सामाजिक सङ्घ÷संस्था ऐन, २०३४ र समाजकल्याण ऐन, २०३९ पनि छन् ।
अबको सङ्घीय संरचनामा यी तीन वटै ऐनलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास ऐन ल्याउने कार्यसूचीे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पक्कै केही परिवर्तन हुनेछ र मैले मन्त्रालयबाट बिदाइ लिँदा यहाँ आउनका लागि मन्त्रीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
हामीले काठमाडौँ मात्रै होइन, कर्णालीलगायतका कुनाकाप्चाका समुदायलाई पनि हेरेका छौँ । सुगममा पनि दुःखका आफ्ना आयाम त छन् तर सबै क्षेत्रका वर्गलाई कसरी सामाजिक रूपान्तरणमा लाने भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । मैले राजनीतिक र सामाजिक कामका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईका दिदीबहिनी, बुबाआमा र छोराछोरीले भोगेका दुःख छामेकोे छु । मन्त्री भएपछि पनि उहाँहरूका दुःखलाई अर्काे ढङ्गले बुझ्ने मौका पाएको छुु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जानुपूर्व ‘सपनाहरूलाई अलपत्र पारेर अलप हुने छैन’ भनेर राष्ट्रलाई दिनुभएको सन्देशमा उल्लेख गरे झैँ हामी उहाँको नेतृत्वमा सामाजिक क्षेत्रका सपना पूरा गर्न लागेका छौँ । अहिले पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र भत्तालाई निरन्तरता दिएका छौँ । कम्युनिष्ट सत्तामा गएमा बुढाबूढीलाई मार्छन् भनेर फैलाइएको भ्रम फैलाइएका बेला कम्युनिष्ट पार्टीकै श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई हामी चुनावी घोषणापत्रअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै जानेछौँ ।
हाम्रा धामी, झाँक्री, आम्चीदेखि प्राकृतिक उपचार विधि र अनुभवहरू नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ । सामाजिक विकासका यस्ता कामलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा किन समावेश नगर्ने ? सतीप्रथा, दास प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो, बाल विवाह, चेलीबेटी बेचबिखन, हिंसाजस्ता हानिकारक
अभ्यासलाई अन्त्य गरेर हामीले लैङ्गिकमैत्री देश घोषणा गर्न किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन नगर्ने ?
कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बलात्कारजस्तोे अमानवीय घटना भयो । अरू ठाउँमा पनि घटना हुनेबित्तिकै हामी उद्धारका लागि पहल गर्छौँ । प्रहरीमा खबर गछाँै र उद्धार पनि गर्छाैँ । नेपाली परम्परामा घटना भएपछि उद्धार गर्नेलाई समाजसेवा भन्छन् तर घटना हुनै नदिन के गर्ने भनेर हामीले पुरुषलाई समेत सहभागी गराउने अभियान शुरु गरेका हौंँ । यस्ता अमानवीय घटनाको मुहान कहाँ छ ? घटनाको स्रोत पत्ता लगाउनुप¥यो ।
अन्धविश्वास र अज्ञानका कारण समाजमा कतिपय हानिकारक अभ्यास पनि हुन सक्छन् । यो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । किन अहिले पनि बलात्कार र आत्महत्याका घटना आइरहेका छन् ? रोजगारीका लागि विदेश जाने र आउने गर्दा उत्पन्न समस्या पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ । समाजमा दिदीबहिनीको इज्जत लुटियो भन्ने समाचार सुन्नुभन्दा गाउँगाउँमा महिला उद्यमशीलता शुरु गरेर नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण गरेपछि यस्ता घटना आफैँ कम हुँदै जान्छन् ।
चिल्लो सडकमा मगन्ते बसेको देखियो भने हाम्रो सामाजिक पक्ष कमजोर देखिनेछ । त्यसैले शैक्षिक र भौतिक सुधार मात्रले विकासको वास्तविक अर्थ वहन गर्दैन । भौतिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासलाई पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्छ । हामीले थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौंँ, उदाहरणका निम्ति महिला र बालबालिकासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरूका हामी पक्ष राष्ट्र हाँैं तर हस्ताक्षर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन भएन भने हाम्रो मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । त्यसैले हामीले विचारपूर्वक कार्यान्वयनमै जोड दिन सक्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयोजनकारी संयन्त्रमा विशेष जोड दिने हो भने योजनाहरूका वान्छित परिणाम हासिल हुन सक्छन् । रासस
अघिल्लोसोती घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जुलुस प्रदर्शन
पछिल्लो‘पर्यटन, कृषि, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धि मादीका मूल आधार